Doorka Cusub ee Sarkaalka Tiknoolajiyadda Suuqgeynta Madaxa
Jimcaha, Agoosto 24, 2012 Axad, Sebtembar 8, 2013 Douglas Karr
Waxaan badanaa jeclaa fikradda Sarkaalka Dakhliga ee Madaxa bannaan oo isku waafajiya suuq-geynta iyo iibinta hal waax oo isku-xidhan. In kasta oo aan aaminsanahay in weli ay mudan tahay, ayaa Madaxa Sarkaalka Teknolojiyada Suuq geynta waa suurtagal xiiso leh sidoo kale. Maaddaama aan la shaqeyno shirkado badan oo waaweyn, waxaa jira xiriir toos ah oo u dhexeeya shirkadda awood la'aanta inay si dhakhso leh u qaadato habab cusub oo ay u ilaaliso dhaqdhaqaaqa iyo waaxdooda tikniyoolajiyadda. Qaladku wuxuu u dhexeeyaa halista iyo abaalmarinta. Waaxaha IT-da ayaa maareynaya halista. Waaxaha suuqgeynta ayaa maareeya abaalmarinta.
Doorkan Madaxa Sarkaalka Teknolojiyada Suuq geynta waxaa qalinka ku duugay Buluug Kai. In kasta oo aanan hubin inuu jiro qof leh cinwaanka dhabta ah ee halkaas ka jira, haddana waxaa jira hubaal fuliyayaal badan oo suuq geynaya oo labada koofiyadood xidha. Adoo hubinaya in hal qof uu mas'uul ka yahay halista iyo abaalmarinta labadaba, waxaad heshay qof u dhaqaaqa sida ugu dhakhsaha badan uguna macquulsan adoo hubinaya teknolojiyaddu inay tahay mid aamin ah oo lagu kalsoonaan karo.
Fure u ah aragtida sawirka ayaa ah taas suuq-geynta suuqa waxay xisaabisaa qayb weyn oo ka mid ah kharashka IT-ga waxayna mas'uul ka tahay saamiyada waaweyn iyo kuwa waaweyn ee dakhliga. Sababtaas awgeed, waxay u baahan tahay ilo gaar ah oo fahmaya sida loo doorto tikniyoolajiyadda suuqgeynta.
Tags: madaxa tignoolajiyada suuq geynta
Cunista Bisadaha, Maile Ohye iyo feedhka Daanyeerka
Maxay Kumbiyuutarkaaga Xiga ee Ganacsiga u Noqonayaa Mac
Agoosto 25, 2012 saacaddu markay ahayd 6:36 PM
Waxaan u maleynayaa inaad ku saxantahay lacagta, Douglas. Waxaan mararka qaarkood ilaawnaa in qaybta "macluumaadka" ee "Teknolojiyada Macluumaadka" loogu talagalay ujeedooyin suuq-geyn ah - si loo helo wax-ku-oolnimo iyo, ugu dambeyn in la iibiyo badeecooyin iyo adeegyo badan. Khadadka ayaa kharibaya waxaanna kaliya ubaahan nahay inaan isfahmino. 😉
Agoosto 26, 2012 saacaddu markay ahayd 11:36 PM
CMTO waxay umuuqataa inay lamid tahay hacker kobcineed oo leh masuuliyado balaaran oo ku saabsan calaamadeynta, fariimaha, iyo maamulka (haddii loo maleeyo in koritaanka uu yahay diiradda ugu weyn ee suuqgeynta). Waxaan xiiseynayaa sida dhaqsaha badan ee dhaq dhaqaaqa CMTO iyo hadii ay gaarayaan go'aano ku saleysan xogta. Waxaan la kulmay CMO badan oo waaweyn oo sheeganaya suuq geynta xogta laakiin wali diirada saaraya cabirrada waxtarka iyo ma ogi hal darawal oo muhiim u ah koritaanka.
Tababarka Warshadda Tababbarka,
Agoosto 31, 2012 saacaddu markay ahayd 9:15 PM
Boorsooyinka gacmeed ee ay sameeyeen naqshadeeyayaasha caanka ah ayaa aad u soo jiita
Khadka tooska ah,
Lahaanshaha boorso ay caan ku yihiin dadka caanka ah hubaal haweeneydu wey dareemeysaa
Dumarku waxay u arkaan wax aan loo dulqaadan karin inay u ekaato muuqaal iyo galmo.
Waxay caan ku yihiin naqshadaha xarrago leh.